eNasha.com - सत्य-स्वरुपः सङ्गीतका उर्लँदो भेल
सत्य-स्वरुपः सङ्गीतका उर्लँदो भेल
- अच्युत कोईराला
पछिल्लो पुस्तामा सत्य-स्वरुप प्रतिभासम्पन्न गायकका रुपमा चिनिन्छन् । उनीहरुको प्रतिभालाई जगले स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसो त यो प्रतिभालाई कतिपय सङ्गीत समीक्षकहरुले वंशानुगत मान्छन् । सत्य-स्वरुपराज आचार्यका पिता भक्तराज आचार्यको गायनको गमक र सुरको पकड ठ्याक्कै उनीहरुमा सरेर आएको छ । त्यसैले त उनीहरुले आधुनिक गीत गाए पनि सुरम्य सुनिन्छ अनि पप गीत गाए पनि नाचुँनाचुँ लाग्छ ।
२०५४ सालमा लाहुरेदाइ गीति एल्बम बजारमा ल्याएर आफ्नो साङ्गीतिक उपस्थिति जनाएका सत्य-स्वरुपले छोटो अवधिमा ठूलो नाम बनाइसकेका छन् । तर चलनचल्तीभन्दा फरक अन्य गायकहरुजस्तो हरेक वर्ष एल्बम निकाल्ने कुरामा चाहिँ कञ्जुस्याइँ गरिरहेको हामी पाउँछौँ । त्यसैले त सङ्गीत उद्योगमा छिरेको १० वर्षको अन्तरमा मात्र तीन वटा एल्बम बजारमा आएका छन् । कम एल्बम निस्किए पनि बाक्लो चर्चा पाउने भाग्यमानी मध्येमा सत्य-स्वरुपलाई लिन सकिन्छ ।
उमेरमा उति फरकपना नभएर होला, धेरैले यिनलाई दाजुभाइ भन्दा पनि साथीभाइका रुपमा चिन्छन् । यी राइट दाजुभाइका व्यक्तिगत र साङ्गीतिक विषयमा छलफल आज हामी छलफल गर्नेछौँ ।
भक्तराज आचार्यको छोरा हुनुको फाइदा कस्तो रह्यो साङ्गीतिक जीवनमा ?
सत्य- फाइदाजनक । किनभने बुवाको नामले नै डोर्‍याइरहेको छ र पछिसम्म पनि जीवनभर छायाँ बनेर पछ्याइरहन्छ । बुवाकै कारणले प्राथमिकता पाइरहेका छौँ । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन वा अन्य मिडियामा प्राथमिकता पाइरहेका छौँ । नामकै कारण विश्वास गर्छन् ।
स्वरुप- फाइदासँगै बेफाइदा पनि छन् । हरेक कुरा बुवासँग तुलना हुन्छ । एकदमै राम्रो गायो भने पनि भक्तराजका छोरा भएपछि यति त गाउनै पर्‍यो नि भन्छन् र नराम्रो गायो भने भक्तराजका छोरा भएर पनि नराम्रो गाउने भन्छन् ।
आफ्नो बालककाललाई कसरी सम्झन चाहनु हुन्छ ?
सत्य- हामी बालककालमा ज्यादै मिहिनेती, चञ्चले र ट्यालेण्टेड थियौँ । कविता, निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम भइन्थ्यो । नाटकहरु आफैँ लेख्ने, निर्देशन गर्ने र खेल्ने गर्दथ्यौँ । नाचघरमा पनि नाटक देखायौँ । फिल्म र गीतको क्रेजी थियौँ । अशोक हलका कुनै सिनेमा छुट्दैनथ्यो । गीत सुन्ने बित्तिकै कण्ठस्थ हुन्थो । कण्ठस्थ भएका गीतलाई हामी उस्तै नक्कल गरेर गाउने प्रयास गर्दथ्यौँ ।
स्वरुप- हामी कोही बेला अलि बदमास पनि हुन्थ्यौँ । चलिरहन्थ्यौँ । चल्दाचल्दै एक पटक सत्यले मेरो हात भाँचिदिएको छ । मामाघरका कुखुराहरु मारिदिने पनि गर्‍यौँ । त्यसपछि त त्यहाँ जान पनि प्रतिबन्ध लाग्यो ।
एक त स्वाभिमानी गायक पिता, त्यसमाथि आर्थिक अभाव, यसले तपाइँहरुको हुर्काईमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? कहिले कुनै कुराको अभाव महसूस भयो ?
सत्य- हामी आर्थिक संकटबाट गुज्रियौँ । त्यसैले बोर्डिङ स्कूल पढ्दापढ्दै पनि पछि एसएलसी सरकारी स्कुलबाट गर्नु पर्‍यो । त्यो बेलामा बुवाको दुर्घटनापछि संघर्ष गर्नका लागि बिक्रम टेम्पो चढ्न चार रुपियाँ पनि गोजीमा हुँदैनथ्यो । लगनखेलबाट सुन्धारा त जसोतसो आउँथ्यौँ तर फर्कने बेलामा कोही चिनेको मोटरसाइकल-चालक भेटिई पो हाल्ला कि भनेर सडक कुर्दथ्यौँ । त्यस्ता दिन पनि थिए ।
स्वरुप- आर्थिक अभावका कुरा त भइहाले । सँगैमा आफ्नो घरमा घरमुली कुनै भयानक रोगको शिकार हुँदा त्यसले पार्ने मानसिक तनाव र अभावबाट धेरै गुज्रियौँ । सत्य, म र ममी यस्ता व्यक्ति थियौँ कि जसले अभाव, पीडा र दुःखसँग धेरै वर्ष संघर्ष गरेका छौँ । बुवाको दुर्घटनापछि एक्कासि चञ्चले केटाकेटीबाट म्याच्योर युवामा परिणत हुन पुग्यौँ ।
मैले सुनेअनुसार बच्चामा तपाइँहरु लुकीलुकी बुवाले रियाज गरेको सुन्नु हुन्थ्यो रे, हो ?
स्वरुप- बुवाले हाम्रो जीवनमा हेभी गीतको टेस्ट राखिदिस्यो । सानो उमेरमै हामीलाई हेभी गीतको रुचि बस्यो । बुवाले आफैँले हार्मोनियममा राखिदिस्या भए झनै फाइदा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । यो सत्य हो, हामीले बुवाको रियाज लुकीलुकी सुनेर नै म्युजिकको टेस्ट पायौँ ।
सत्य- लुकीलुकी सुन्नुको कारण चाहिँ उहाँ हाम्रो स्कूलको संगीत र अंग्रेजी विषयको शिक्षक होइसिन्थ्यो । बुवा ज्यादै कडा होइसिन्थ्यो । हामी स्कूलमा पनि डराउँथ्यौँ, घरमा त झनै । ज्यादै स्ट्रिक्ट होइसिन्थ्यो । त्यही भएर हामी उहाँले रियाज गरेको लुकीलुकी सुन्थ्यौँ । बेफाइदा के रह्यो जस्तो लाग्छ भने, गायन टेक्निक सिकिन्थ्यो होला, कर्ड, राग र अन्य गम्भीर सङ्गीत बुझ्न सक्थ्यौँ होला । फाइदा चाहिँ सानो उमेरमा नै झपताल, रुपकताल काउन्ट गरेर गाउन सक्थ्यौँ । बाह्रै सुरको ज्ञान त्यै बेला अलिअलि थियो ।
कुन बेलादेखि लाग्यो तपाइँहरुलाई कि बुवाको गायन मोह आफूमा पनि सरेछ भनेर ?
सत्य- स्कूलदेखि नै गाउँथ्यौँ । स्कूलमा बुवाले सिकाइसिन्थ्यो । त्यति बेला नै फस्ट प्राइज जितेर ल्याउँथ्यौँ । त्यो टेस्ट हामीमा सर्‍यो भन्ने कुरा चाहिँ बुवाको दुर्घटनापछि बढी थाहा पायौँ ।
स्वरुप- बुवाको दुर्घटनापछि हाम्रो घरमा १० वर्ष हार्मोनियम बजेन । त्यो बेला सांगीतिक वितृष्णा जन्म्यो । तर जति हारे पनि हामी अवश्य उठ्छौँ भन्ने लाग्यो । धेरैले हामीलाई झुलाए, अन्डरस्टीमेट गरे भन्ने लागेपछि नै हामी यसमा अझ बढी गहिरिएर लाग्यौँ । त्यसैबेला हो, हामीलाई बुवाको गायन मोह हामीमा पनि सरेछ भनेर ।
बुवाको त्यो कुन दुर्घटना थियो ? त्यो कसरी घट्न पुग्यो ?
सत्य- २०४६ साल मंसीर १९ गते राति गोपाल योञ्जनको घरमा रियाज गरेर फर्कँदा कञ्चन पुडासैनी र बुवालाई पूर्ण नेपाली भन्ने गायकले तेब्बर लोड बोकेर घर पुर्‍याउनु पर्ने भयो । कञ्चन पुडासैनीलाई जोरपाटी छोडेर फर्कँदा बौद्धमा अलिकति खाउँ भनेर भन्नु भयो । त्यसबेला गुण्डाहरुको चहलपहल निकै थियो त्यहाँ । बुवाले अस्वीकार गरिस्यो । पूर्ण नेपालीले खाने मूडमा रेष्टुराँमा छिर्नु । खाइसकेपछि त्यहाँका गुण्डाले उहाँलाई पैसा तिराउन लगाए र हातपात समेत गरे । आफूले नखाएको पैसा तिर्ने कुरा थिएन । पछि गुण्डाको कुटाइबाट बच्न पूर्ण नेपालीले उसले तिर्छ भनेर बुवातिर देखाइदिएर अर्को बाटोबाट भागे । बुवालाई एक्कासि गुण्डाहरुले घेरेर पैसा तिर्न भने । एक्कासि आफूलाई पैसा तिर्न गरेको बलजफ्तीका कारण शुरुमा त उहाँ छक्क पर्नुभयो र पछि तिर्न अस्वीकार गर्नुभयो । यही निहुँमा बुवालाई निर्घात कुटपिट गरे । जसका कारण बुवाको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो । १०० टाँका टाउकोमा लगाउनु पर्‍यो । यो घटनाले हाम्रो परिवार क्षतविक्षत भयो ।
स्वरुप- बुवालाई त्यस्तो भयो भन्ने कुरा त महसूस पनि भएन । बुवाका लागि त्यो पिक टाइम थियो । उहाँका लागि महिनौँ कुर्ने संगीतकार, गीतकारहरु थिए । अहिले विचार गर्दा यो अनसल्भ्ड मिस्ट्री र सुनियोजित षडयन्त्र जस्तो पनि लाग्छ ।
कुन बेला तपाइँहरुलाई लाग्यो, अब हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग नै म्युजिक हो भनेर ?
सत्य- २०५५ सालमा लाहुरे दाइ एल्बम रिलिज भयो । मौन तिम्रो अधरले... गीतको भिडियो बन्यो । हिट भयो । हिट्स अवार्डको बेस्ट न्यू आर्टिस्ट पुरस्कार पायौँ । यसपछि नै हो, म्युजिक मै लाग्नु पर्छ र यो नै हाम्रो जीवनको अंग हो भन्ने लागेको ।
स्वरुप- रेकर्ड गर्ने क्रममा अन्य व्यक्तिहरुले गाउन दिन थाले । एक पटक काम गरेकाहरु दोहोर्‍याउन र तेर्‍याउन थालेपछि हामीलाई लाग्यो कि हामीमा पनि केही रहेछ !
स्कूलमा पहिलो पटक तपाइँहरुले कहिले आफ्नो गायन प्रस्तुत गर्नु भयो ? त्यसबेलाको कुनै स्मरणीय क्षण ?
सत्य- नर्सरीमै गाउँथ्यौँ, राइम्सहरु । टीका विद्याश्रम माविमा पढ्दा एक चोटी ६ कक्षामा हुँदा बुवाको बालगीत गाएको थिएँ- वसन्तका फूल हौ, शरदका जून हौ... । सप्पैले प्रशंसा गरेका थिए । गायकका छोरा, गायकै बन्नुपर्छ भनेका थिए धेरैले । त्यो क्षण मलाई अहिले याद आइरहेको छ ।
स्वरुप- त्यही कार्यक्रममा बुवाकै आज हामी साना-साना नानी... गाएको थिएँ । अन्य स्कूलका पनि थिए । सत्य प्रथम म चाहिँ दोस्रो भएको थिएँ । अहिले मलाई त्यही क्षण याद आइरहेको छ ।
तपाइँहरुको जीवनमा एउटा घटना वज्रपात बन्यो, बुवामाथिको आक्रमणपछिको क्यान्सर । त्यसबेलाको क्षणलाई कसरी सम्झनु हुन्छ अहिले ?
सत्य- सय टाँका लगाए पनि डाक्टरहरुको पूर्वानुमान अनुसार न त उहाँमा पागलपनको कुनै लक्षण देखियो न त अङ्गभङ्ग नै भयो । पछि उहाँ निको भइसकेपछि नाचघरमा कर्न्र्सट पनि गरिस्यो । तर पछि चाहिँ सानो खटिरा जिब्रोमा देखापर्‍यो । त्यही घटिरा क्यान्सरमा परिणत भयो । त्यसपछिका दिनमा एक निरीह स्त्री र दुइ अबोध बालकहरुको भविष्य सम्झेर बुवा छटपटाइसिन्थ्यो । त्यही पीडाले रुने, कराउने गरिसिन्थ्यो । त्यो पीडाका कारण उहाँ पीडाबाट मुक्ति पाउन डोरी लिएर निस्किसिन्थ्यो, आत्महत्या गर्न । यस्तो अवस्थामा आमा रोइसिन्थ्यो, बुवा पनि । दुवै अभिभावक रोएको देख्दा हामीलाई असाध्य पीडा हुन्थ्यो । त्यो पीडाको तपाइँ अनुमान मात्र गर्नसक्नु हुन्छ, महसूस गर्न सक्नु हुन्न ।
स्वरुप- क्यान्सरपछि हाम्रो घरमा जुन अवस्था आयो, त्यो सम्झदा गीतार र हार्मोनियम प्रति नै घृणा हुनुपर्ने हो । पीडा, रोदन, दुःखलाई हामीले प्रत्यक्ष भोग्यौँ । त्यस बाहेक पनि बलेको आगो ताप्ने उखान पूर्ण रुपमा सत्य रहेछ भन्ने कुरा आफ्नै घरमा, आफ्नै आँखाअगाडि देख्ने मौका पायौँ ।
तपाइँलाई सङ्गीत उद्योगमा तान्ने काममा चर्चित सङ्गीतकार शम्भुजीत बासकोटाको पनि रहेको छ भनिन्छ, सत्य के हो ?
सत्य- शत प्रतिशत सत्य हो । किनभने विस्तारै गाउन थालेको बेलामा, रेडियोमा आवाज सुनेको भरमा एकेडेमीमा बोलाएर गाउन दिनु भएको थियो । पहिलो गीत १६ वर्षो जोवन फिल्मको गीतको टाइटल गाउन दिनु भएको थियो । जुन गीत ज्यादै लोकप्रिय पनि बन्यो । र, मलाई एकेडेमीमा पनि जागीर दिनुभयो । पछि म त्यहीँ २०५६ देखि २०५९ सम्म गायक र अभिनेताका रुपमा त्यहाँ जागीर पनि खाएँ । बुवापछिका बुवा, गुरु वा मार्गदर्शक उहाँलाई जे भने पनि हुन्छ ।
स्वरुप- यो अवस्थामा हामी दुइ जना आइपुग्नुमा उहाँको ठूलो हात छ । चलचित्रमा गाउने मात्र होइन कि भिन्न शैली र शिल्प कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउनु भयो । उहाँले मलाई त बम्बईमा लगी मुम्बई गएर भारतीय गायक-गायिकाहरुसँग उठबसको मौका पाएँ । १९ वर्षको उमेरमा मजस्तो फुच्चेले त्यो अवसर पाउनु निश्चय नै सुखद् कुरा थियो । त्यस्तै २००० मा हंगकंगमा कार्यक्रम गर्ने मौका पाएँ उहाँसँग । अझै पनि धेरै कुरामा उहाँले सल्लाह सुझाव दिनु हुन्छ । उहाँका एल्बममा हामीले निरन्तर गाउने मौका पाइरहेका छौँ ।
तपाइँहरुको पहिलो एल्बम लाहुरे दाइ निकाल्नु पर्छ भनेर कहिले सोच पलायो ?
स्वरुप- मौन तिम्रो अधर... रेकर्ड २०५४ मा गर्दा साथीभाइलाई सुनायौँ । एल्बम नबन्दै हिट्स अवार्ड पायौँ । त्यो अवार्डले हामीलाई हौसला दियो र एल्बम बन्यो ।
सत्य- रामकृष्ण ढकालको एल्बम आर्शीवादको चर्चा ज्यादै ठूलो त्यसबेला। एल्बम भन्ने कुरा ठूलो रहेछ भन्ने लाग्यो । एल्बम मार्फत् नै घरदैलोमा पुग्न सकिँदो रहेछ भन्ने लागेर यो एल्बम निकाल्न लाग्यौँ । त्यसबेला एक जना दाइले २० हजार सहयोग गर्नुभयो । र, एल्बम बजारमा आयो ।
यो एल्बमले तपाइँहरुलाई पहिचान त दिलायो तर उति धेरै सफल एल्बम होइन भन्छन् नि ?
सत्य- एल्बम निस्कनु अघि नै भिडियो बन्यो र अवार्डसमेत पाइसकेको अवस्था थियो । एल्बम निस्कियो तर प्रमोशन भएन । अन्य भिडियो पनि बनेनन् । त्यसैले त्यो एल्बम जति हिट हुनु पर्दथ्यो, हुन सकेन ।
स्वरुप- जेनतेन दुःख गरेर एल्बम निकालियो । प्रविधि र व्यवहारिक रुपमा पनि कमजोर भएको र केही थाहा नभएको कारणले त्यो एल्वममा जति गर्न सकिन्थ्यो, गर्न सकिएन । कतिसम्म भने एल्बमबाट कति रोयल्टी आयो होला भनेर बुझ्न जाँदा त म्युजिक नेपाललाई हामीले उल्टै १ हजार ७ सय १९ रुपियाँ तिर्नुपर्ने देखिएछ ।
यो एल्बमका गीतहरु जति प्रख्यात हुनु पर्ने हो भएन भन्ने केही समीक्षकको भनाइलाई तपाईहरु के भन्नु हुन्छ ?
सत्य- सही कुरा हो । त्यसबेला सुन्ने भन्दा पनि हेर्ने जमाना आयो । फास्ट ट्रयाकको भिडियो बन्यो । तर अन्य गीतहरु ओझेलमा परे । जसमा बुवाका कम्पोज भएका गीतलाई केही गर्न सकिएन । मीठा गीत प्रमोशनको अभावका कारण नै ओझेलमा रहे र तुहिए ।
स्वरुप- गीतहरु ज्यादै राम्रा थिए । नयाँ कलाकार भएकाले पनि कम्पनीले गम्भीरतापूर्वक नलिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो ।
त्यसपछि तपाइँहरुले अलि बढी समय लिएर मुटु जलिरहेछ एल्बम निकाल्नु भयो । आफ्ना बुवाका गीतलाई आफ्नो स्वरमा गाएर, कस्तो अनुभव रह्यो ?
स्वरुप- गाह्रो अनुभव । लाहुरे दाइ निकालिसकेपछि पपतिर लागे भनेर केही जमातले आलोचना गरे । तर ती व्यक्तिका लागि राम्रो सबक थियो, पाठ थियो । गाह्रा गीत भए पनि त्यसमाथि हामीले गरेको मिहिनेतले रङ ल्यायो ।
सत्य- बुवाको गीत गाउनु नै फलामको च्यूरा चपाउनु हो । जो सुकैलाई पनि । हामीले तीन वर्ष मिहिनेत र रियाज गरेर, बुवाबाट सिकेर एल्बम निकाल्यौँ। सात सात टेकमा ओके भएका गीतहरु पनि त्यहाँ छन् । बुवाको डेप्थ, रेञ्ज, सुरको पकड र गायकीलाई पछ्याउन नसके पनि 'फील' गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । जहाँसम्म लाग्छ, त्यो सफल भयो । र, महत्वपूर्ण कुरा मुटु जलिरहेछ... भिडियोले पनि ठूलो प्रभाव पार्‍यो ।
तपाइँहरुको एल्बम सुन्दा उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो ?
सत्य- अझ मिहिनेत गर, सुरज्ञान लिनु भनिसिन्थ्यो । अल्छी नगर, रियाज पुगेको छैन आदि भनिसिन्थ्यो ।
स्वरुप- बुवाले कहिले पनि पप या सस्तो म्युजिक शैली भनेर हेपिसिन्नथ्यो । यो पनि एउटा शैली हो तर गम्भीरता हुनुपर्छ भनिसिन्थ्यो । यसमा शास्त्रीयता घुसाउने सुझाव दिइसिन्थ्यो ।
अहिले तपाइँहरुको काममा बुवाको सहयोग कस्तो हुन्छ ? उहाँले सुझाएका केही राम्रा कुराका उदाहरण छन् कि ?
स्वरुप- प्रायः कम्पोजिशनमा उहाँको सिग्नेचर हुन्छ । जस्तो अलिअलि भन्दाभन्दै... (जगदीश समाल) गीतमा उहाँले सिकाइस्या कुराहरु प्रयोग गरेका थियौँ । तिम्रो नशालु आँखाले मलाई मार्‍यो.... गीतमा पहिले हाम्रो दुइ वटा मात्र भेरिएशन थियो (अन्तराको अधरमा नशा तिम्रो मुहारमा नशा) तर यसलाई चार वटा बनाउने सुझाव दिइस्यो । उहाँले सिकाइदिस्या टेकनिकका कारण त्यो अझ सुन्दर भएको छ ।
सत्य- बुवाको मूडमा भर पर्दथ्यो । उहाँ कहिलेकाहीँ हाम्रो गीत सुनेर आइसिन्छ र सुझाव दिइसिन्छ । कहिलेकाही बिट नै चेञ्ज गरिदिसिन्छ । जस्तो, दादराको एक मात्रा बढाएर रुपकमा लैजान सुझाव दिइसिन्थ्यो । त्यो प्रयोग गर्दा अझै मीठो हुने र फ्लो पाउँथ्यो । हामीले लेखेका शब्दमा कतिपय शब्द चेञ्ज गरिदिइसिन्थ्यो । उहाँले हिन्दी शब्द घुसाउँदा त्यसलाई त्यति रुचाइसिन्न । यी कुराहरु प्रायः सिर्जनामा हामीमा पनि लागू भइरहेका छन् । कहिलेकाहीँ हामी कन्फ्यूज हुँदा बुवालाई सोध्छौँ, र उहाँले यति भेरिएशन दिइसिन्छ कि हाम्रालागि ती निकै प्रेरक हुन्छन् ।
अहिलेको नयाँ एल्बम म्युजिक चाहिँ कस्तो एल्बम हो ?
सत्य- यो सम्पूर्ण रुपले प्रयोगात्मक एल्बमको रुपमा यसलाई लिएका छौँ । किनभने यसमा फ्यूजन शैलीका गीत, सुफी टचका गीत, पूर्वीय र पाश्चात्य संगीतलाई ब्लेण्ड गर्ने, आलाप र सरगम ठाउँठाउँमा लिएर वेर्स्र्टन सिंगिङको मोडूलेशनलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेका छौँ । विशुद्ध मादलमा रक र गीतारको मिश्रण उपयोग गरेका छौँ । पूर्वीय लोकभाका लिम्बूहरुको पालमलाई पनि घुसाउने प्रयास गरेका छौँ । आधुनिक शैलीका गीतलाई संयोजन नै फरक भएकाले गीतको रंग नै भिन्दै पाउन सक्नु हुन्छ ।
स्वरुप- यो एल्बम हाम्रा लागि महत्वपूर्ण एल्बम हो । हाम्रो आफ्नै सबै संगीत र अधिकांश शब्दमा निकालिएको एल्बम हो । जसलाई दर्शक श्रोताले रुचाइदिनु भएकाले त्यो प्रयोग सफल भएको हामीलाई लागिरहेको छ ।
दशैँ अगाडि बजारमा आइसकेकोले अहिलेसम्म यसको व्यापार कस्तो पाउनु भएको छ ?
स्वरुप- अहिलेसम्म ज्यादै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ ।
सत्य- विगतका एल्बमले ६ महिनामा दिने फिडब्याक यो एल्बमले एक महिनाभित्रैमा दिएको छ । अब आफैँ कल्पना गर्नुस्, ६ महिनामा यसले के गर्ला !
भविष्यका दिनमा तपाइँहरुले त अहिले नै गजल एल्बमसमेत तपार पारिसक्नु भएको छ भन्ने हल्ला छ नि ?
सत्य- गजल मात्र निकाल्ने योजनामा छौँ । यो पूर्णरुपमा व्यवसायिक नहुन पनि सक्छ । तर पनि व्यवसायिकता ल्याउन, संयोजन पक्षमा ध्यान दिएका छौँ । पाश्चात्य र लोक शैली मिसिएको अनि जुगलबन्दी गरिएको यो मौलिक एल्बम हुनेछ ।
स्वरुप- गजलहरु गाह्रो शैलीका भए पनि सुमधुर हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरिरहेका छौँ । लेख्नका लागि मात्र गजलहरु छन्, तर गाउनका लागि समेत हुनु पर्ने हाम्रो मान्यता भएकाले यो एउटा श्रवणीय एल्बम हुनेछ भन्ने हाम्रो दाबी छ ।
अन्त्यमा, दर्शक तथा श्रोताहरुलाई केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
स्वरुप- म्युजिक एल्बमलाई किनेर सुनिदिनुस् । राम्रो भए ताली बजाइदिनुस् र अरुलाई पनि किन्न भन्नुस् । नराम्रो भए गाली गर्नुस् ।
सत्य- नेपाली सङ्गीत र साहित्यलाई माया गरौँ । नेपालीपनमा विश्वास गरौँ । नेपाल रहे नेपाली रहन्छौँ । धन्यवाद ।
photos: Anil Sthapit
लुकेका कुरा गायक सङ्गीतकार तातोपीरो रिलिज समुद्रपार क्या बात ! कीर्तिमान नेपाली तारा अवार्ड भिडन्त विचार ट्रयाक बाहिर पेज थ्री प्रेम र विवाह उपलब्धि गीतकार गायिका बजारमा कन्सर्ट